JUVENTUS VS TORINO: Shaxda & safafka ay fiidkii kusoo geli karaan! – Gool FM
JUVENTUS VS TORINO: Shaxda & safafka ay fiidkii kusoo geli karaan!
Raage September 10, 2016
(Torino) 10 Sebt 2016 – Waxaa caawa fiidkii isku beegan kooxaha Juventus vs Sassuolo oo labadii kulan ee bilowga wada badiyey, waloow kooxda dambe dhibcihii kulankii 2-aad laga xayuubiyay kaddib markii ay saftay laacib aan u diiwaan gashanayn.
Dhanka Juve: Kulanka Sassuolo waxay soo safi kartaa Pjanic, oo kasoo kabtay jug yar oo ku gaartey tababarka, sida uu shir jaraa’id ka caddeeyay Massimiliano Allegri waxaa sidoo kale dheeli kara Benatia, Lichtsteiner iyo Higuain. Iyadoo dadka loo yeerey uu ka mid yahay Cuadrado.
Dhanka Sassuolo: Waxaa cuslaynaysa ka maqnaanshada Berardi, halka Defrel aan la heli karin, weerar seddexleey ah ayaa waxaa is garabsanaya Ragusa, Matri iyo Politano. Terranova oo soo kabtayna kaydka ayuu kululayn doonaa.
Buffon 1 47 Consigli
Lichtsteiner 26 23 Gazzola
Alex Sandro 12 13 Peluso
Chiellini 3 4 Magnanelli
Bonucci 19 28 Cannavaro
Benatia 4 15 Acerbi
Khedira 6 7 Missiroli
Pjanic 5 32 Duncan
Higuaín 9 10 Matri
Dybala 21 16 Politano
Asamoah 22 90 Ragusa
Neto 25 1 Pomini
Audero 32 79 Pegolo
Rugani 24 20 Pol Lirola
Barzagli 15 98 Adjapong
Dani Alves 23 5 Antei
Evra 33 55 Letschert
Cuadrado 7 22 Mazzitelli
Lemina 18 0 Pellegrini
Hernanes 11 8 Biondini
Mandzukic 17 27 Ricci
Pjaca 20 9 Iemmello
Mandragora, Marchisio, Sturaro
Berardi, Dell’Orco, Sensi, Defrel
Matic: Aniga, Conte iyo kooxda ayaa wada go'aansaday in aan baaqi noqdo
USC PALERMO VS SSC NAPOLI: Shaxda & safafka ay caawa lasoo shirtegi karaan!